'Abbaan koo qawwee bitee na leenjise' qabsooftuu Ayishaa Mahaammad Gadaa - BBC News Afaan Oromoo
'Abbaan koo qawwee bitee na leenjise' qabsooftuu Ayishaa Mahaammad Gadaa
"Sababni gara qabsoo itti seenneef sirni mootummaa Haayila Sillaasee kaan fixaa, kaan uleedhaan tumaa aadaas waan balleessefi," jedhu qabsooftuu Aadde Ayishaa Mahaammad.
Maanguddoon gama tokkoon qabsoo hidhannoon gama biraatin immoo ijoollee shan dahanii guddisuun bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa darban amma wantoota dur harka isaanii turan baay'ee dhabaniiru.
Adde Ayishaan qaroo ija isaanii lamaan dhabaniiru, ijoolleen isaanii sadi du'aan boqataniiru, harka qallachuun qaamaafi qalbii isaanii miidhee jira, qe'een isaanii hafuurri onaa guute, Aadde Ayishaan nama deddeebi'ee isaan gaafatu fi kan cinaa taa'ee isaan kunuunsu akka hin qabaanne agarsiisa.
Asaffaa Shaaroo Lammii dhibamaniiru
'Abbaa koo Guutamaa Hawaas namatu na barsiise' Biiftuu Guutamaa
Umrii ijoollummaa isaaniitti gara qabsootti kan makaman adde Ayishaa Mahaammad Gadaa, bara 1920'n keessa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluq ganda Aanolee jedhamtu keessa akka dhalatan himama.
Abbaan isaanii Mahaammad Gadaa Qaalluun hangafa qabsoo qonnaan bultoota Baalee seenaa jabaa dalaganii maqaa gaarii horatani dha.
Imalli qabsoo adde Ayishaas qawwee abbaan isaanii Mahaammad Gadaan bitanii itti kennaniifi leenjii isaanirraa argatan irraa eegala.
Mahaammad Gadaan qabsoo cimaa humnootii mootummaa Haayila Sillaasee walin waggootaaf taasisaniin cinatti intala isaanii adde Ayishaa malee qabsaa'oota bebbeekamoo akka Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Kolonel Aliyyii Cirrii gara daandii qabsootti fiduunis beekkamu.
'Abbaan koo qawwee bitee na leenjise' Ayishaa Mahaammad Gadaa
Mahaammad Gadaan waggoota saddeetif hidhaarra erga turanii booda humnootii mootummaa Haayila Sillaaseen mana hidhaa magaala Gobbaa keessatti ajjeefaman.
"Mahaammad Gadaa karaa itti ajjeessan yeroo dhaban "abbaabba dhukkubni dhufeeraati lilmoo si waraanna" jedhaniin. Inni ni dide. Yeroo kana 'giddiin' qabanii lilmoo waraanan. Mahaammad Gadaan dheerina ofii, diimina ofii fi bareedina ofii dhiisee haganatti deebi'e.
Osoo akkasiin jiruu du'e. Abbaa koo akkasitti ajjeessan," jechuun akkaataa abbaan isaanii itti ajjeefaman yaadattu qabsooftuu adde Ayishaa Mahaammad.
Qarree, haadha fi qabsooftuu…
"Ani xiqqoon ture. Qarreen qaba. Mahaammad Gadaa walin alan oola ture. Qawween isaa lama. Isa tokko yaa barattu jedhee anaaf bite. Inni albeenii dheeraa qaba. Akkatti rasaasa qawwee keessaa baasan fi qadaadan na barsiisa. Qawwee hiikuu fi 'alaamaas' na barsiisa ture" jedhu adde Ayishaan waa'ee yeroo ijoollummaa isaanii yeroo dubbatan.
Qawwee abbaa isaanii irraa kennaan argatanin qabsoo kan eegalan adde Ayishaa Mahaammad muddannoo yeroo ijoollummaa isaanii keessaa tokko akkana jechuun nutti himan.
Keeniyaatti Meejar Jeneraala dubartii ishee jalqabaa
"Qawwee koo manaa fudhadhee gadi fiige. Humnooti Haayila Sillaasee wal waamanii dhukaasa dhukaasuu eegalan. Inni tokko "hadaraa Jaanihoy, hadaraa Haayila Sillaasee" jechaa Mahaammad Gadaa hadara. Ani hadaraa hin beeku.
Akkuman fiigaa dhufeen abbaa koo ajjeessan jedhee qawwee 'tim' godhe. Namichi ni kufe. Kan walin jiru qawwee harkaa hin qabu ture. Inni baqatee deeme. Kan ani rukkute sun garuu ni du'e" jedhan.
Adde Ayishaan abba isaanii Mahaammad Gadaa, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Kolonel Aliyyii Cirrii, abbaa warraa isaanii Sammattar Maanee fi qabsaa'ota dubartoota biro cinaa hiriiruun godina Baale iddoowwan garaagaraa deemun lolaniiru.
Adde Ayishaan "Koloneel Aliyyii walin walin dhukaasne waliin diina ofirraa ariine, Jeneraal Waaqoonis nama du'a irraa nama baase" jechuun qabsaa'oota lamaan leellisu.
Qabsooftuu Ayishaa Mahaammad Gadaan abbaa warraa isaanii walin ijoolee shan horatanis yeroo ammaa dubartoota lama qofatu lubbuun jira.
"Kophaa koo rabbi jalan jira"
"Akkan hin dalaganne ganni kiyya dhumeera. Jiruu keessa jirrullee akkuma rabbi beeku" kan jedhan adde Ayishaa Mahaammad Gadaa nama isaan gargaaru hin qaban.
"Ijoollee koo lubbuun jiran lamaan keessaa tokko abbaan warraa irraa du'ee Dallootti kophaashee ijoollee guddisti. Isheen tokko kan Angeetu jirtu immoo ni dhibamti" jedhan.
"Ani dur akka abbaa kootii maqaan qaba ture. Amma wanti sun hundi narraa dhumte" kan jedhan adde Ayishaan "Oromoon akka na jiraachistee na ulfeesitu, akka quba na qabaattun dhaammadha" jechuun harki fi onneen isaanii gargaarsa akka fedhan dhammatan.
Asaffaa Shaaroo Lammii dhukkubsatanii hospitaala jiru
27 Guraandhala 2019
Biiftuu Guutamaa Hawaas: 'Abbaa koo Guutamaa Hawaas namatu na barsiise'
5 Bitooteessa 2019
Keeniyaan seenaa biyyattii keessatti Meejer Jeneraala dubartii jalqabaa muudde
Artiist Umar Suleemaan: Osoo rasaasaanuu nadura dhaabbatanii yaada kiyya hin jijjiiru
15 Amajjii 2019
Viidiyoo Dubartii Miyaanmaar ishee dhumaa tumaa fuularraa qabdu
Nelsan Mandeellaa Itoophiyaa keessa torbee lamaaf turan
Itoophiyaan reeffi nama koronaavaayirasiin du'e akka biyya hin seenne dhorkite
Taayiwaan yaada Dr Teedroos Adihaanom balaaleeffatte
'Dhukkubsattoonni dhibee biraa dagatamaa jirra'
Waa'ee Saadiyoo Maanee wantoota isin quba hin qabne shan